TAO ANATY MARIAZY : Nataony sahala amin’ny vadiny ilay tovovavy nangalarany ilay sakaosy
Tsy tery lalana tokoa ny ratsy ka mahita fomba hangalarana amin’ny fotoan-drehetra. Ny sabotsy 2 septambra lasa teo, tovovavy iray indray no lasibatra. 11 septembre 2017
Namonjy lanonana fisoratam-panambadiana natao tao amin’ny efitrano malalaka Stella Maris Toamasina ilay tovovavy. Nisy lehilahy nanatona sy niray latabatra taminy. Tsy nanana ahiahy ilay tovovavy fa noheveriny fa samy fianakaviana iray mamonjy lanonana. Niara-nandihy, niara-nisotro. Nisy fotoana nivoaka kely ny efitrano misy lanonana ilay tovovavy. Nohararaotin’ilay olon-dratsy izany. Noraofiny ny sakaosy nipetraka teo ambony latabatra.
Tsy nahalala na inona na inona ireo nahita maso izay nihevitra fa vadin’ilay tovovavy izy. Niverina avy any ilay tovovavy, tsy hita popoka intsony ilay sakaosy. Natao ny fanarahan-dia saingy tsy hita intsony ilay jiolahy. Vola 100 000 Ariary, finday, karatra banky, karapanondro, samy tany anatin’ilay sakaosy avokoa.
Tsy nahazo fanasana akory
Natao ny fanamarinana rehetra, tsy anisany nahazo fanasana tamin’ilay fety akory ilay tovolahy ary tsy nanana fianakaviana tao mihitsy saingy nahita hirika nidirana nanaovana asa ratsy tao. Nametraka fitoriana any amin’ny polisy ilay tovovavy. Vavolombelona maro no miara-mitory aminy.
Nisy mpaka sary tao anatin’ilay lanonana nahazo ny sariny. Miparitaka ao Toamasina ny sariny amin’izao fotoana izao. Mitohy ny fikarohana. Fantatra fa efa fanaon’ilay tovolahy anaty lanonana io fomba fangalarana hafa kely io.
Nahazo fandrahonana ny orinasa mpanamboatra lalana any Ambilobe MARARY FO NY HVM (584) 15 mars 2018 Noroahina hivoaka ny lapa ny mpanao gazety, raikitra ny ady saritaka FANDINIHANA LALAM-PIFIDIANANA TENY TSIMBAZAZA (372) 14 mars 2018 Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra FANAMBANIANA MPANAO GAZETY (348) 15 mars 2018 Ramatoa iray maty, tovovavy efatra lasa natao takalon’aina FANAFIHAN-DAHALO TAO MAHABO (266) 15 mars 2018 Miparitaka ao Toamasina, lasa fitaovam-panaparam-pahefana KARATRA « ASSISTANT PARLEMENTAIRE » (175) 19 mars 2018 Saron’ny zandary ireo jiolahy nahavanon-doza FANAFIHANA MAHERY VAIKA TENY ITAOSY (172) 19 mars 2018